Carrot Oiri yeKukora KwebvudziMabatiro aungaigadzira, mabhenefiti - Runako
sei kudzoreredza tsamba icon pane iphone
iphone 5 yakatsemuka screen wont batidza
windows inoziva iphone asi itunes haina
iphone 7 batidza ringer
Carrot Oiri Yekukura Kwebvudzi Kwakanaka Sei Izvo? | Maitiro Ekuzvigadzira uye Kubatsira
Carrot Oil Hair Growth How Good Is It
Carrot Oiri yekurasikirwa nevhudzi
Carrot mafuta ebvudzi rechisikigo, Mishonga ine karoti mafuta kune yakasimba uye ine hutano bvudzi . Kunyangwe ichizivikanwa zvirinani nekuda kweganda rayo mabhenefiti, mavitamini uye zvicherwa mumakarotsi zvinogona zvakare kukubatsira iwe kuve yakasimba uye ine hutano bvudzi.
Wati wambonzwa nezve mabhenefiti etiroti mafuta ekurapa bvudzi rako?
Kazhinji, vhudzi rako rinokura anenge 1 sentimita imwe neimwe mwedzi . Uku kukura kunokonzerwa nehutano hwaunowana kuburikidza nedhayeti yako. Izvo zviri nani uye zvine hutano kudya kwako, iro rakasimba bvudzi rako richava.
Nenzira imwecheteyo , unogona kusimbisa vhudzi rako nezvinovaka muviri kuburikidza nezvigadzirwa zvepanyama ine yakakwira kuwanda kwevhithamini nemaminerari.
Zvakanakira mafuta ekarotsi ebvudzi rako
Karoti yekukura kwebvudzi. Isu tinoziva kuti karoti akakwana kune hutano hwako. Mamwe mabhenefiti anosanganisira:
Ane mavitamini C uye E. Aya mavitamini wedzera kutenderera kweropa mumusoro wako, kudzivirira vhudzi risati rasvika.
Makarotsi anodzivirira ganda rako kubva mukukuvara kwekunze, senge kusvibiswa, zuva, mamiriro ekunze, nezvimwe.
Kurasikirwa kwebvudzi kunogara kuchiperekedzwa nebvudzi rakaoma, rakapfava, risina kuchena. Kudya makarotsi kunoita kuti vhudzi rako ritsvedzerere uye kupenyerera.
Kutenda kune vhitamini zvemukati (A, B1, B2, B6, C, E, K), anosimbisa bvudzi rako uye anoita kuti vhudzi rako rioneke riri nani.
Karoti inokurudzirwawo kubatsira bvudzi rako kukura nekukurumidza. Vanoita izvi nekuda kwehuwandu hwavo hwe potassium phosphate uye mavitamini. Izvi zvinokurudzira bvudzi follicles uye kudzora kurasikirwa kwebvudzi.
Kunze kwemabhenefiti mazhinji ane karoti kune rako bvudzi, iwo akakodzerawo ako ganda, maziso ako, uye kusimbisa immune system yako.
Nzira yekugadzira mafuta ekaroti kune vhudzi
Kurapa nekaroti mafuta nekokonati uye uchi
Zvakanakira oiri karoti yebvudzi. Nekuti ivo vakapfuma muvhitamini E, makarotsi anorwisa kurasikirwa kwebvudzi. Zvakare, vanoita kuti vhudzi rako ripenye uye riite hutano.
Kokonati rine maoiri akakosha anoita kuti ive yakakwana kurwisa dhandi. Izvo zvakare inokodzera kurudziro yebvudzi kukura uye kuichengeta iine hydrated. Chekupedzisira, huchi hunotsvedzerera bvudzi rako.
½ mukombe coconut mafuta (unogona zvakare kushandisa coconut mukaka kana coconut cream kana usina mafuta aya)
Supuni imwe yeuchi
Nesefa kana jira kusefa musanganiswa.
Shamba karoti, yakakangwa kana kucheka kuita zvidimbu zvakanaka kwazvo wozobvisa muto wacho.
Sanganisa muto wekakaroti nemafuta ekokonati neuchi.
Paunowana poda yakatsetseka, ndokumbira uise mumucheka kana nesefa kuti uparadzanise mafuta.
Wobva watora mafuta ekarotsi aunowana wozora pamusoro pebvudzi rako rese, kubva pamidzi kusvika kumagumo.
Wobva waisa kapu yekugeza uye rega mafuta anyorove mukati kwehafu yeawa.
Mushure memaminitsi makumi matatu, geza bvudzi rako senguva dzose.
Kuti uwane mhedzisiro, dzokorora kurapwa uku mazuva ese gumi neshanu.
Kurapa nekarroti, avocado, uye zai
Pamusoro pemudzi, kurapwa uku kune zvimwe zviviri zvinobatsira kugadzirisa bvudzi rako.
Iyo avocado inonwisa mvura kwazvo bvudzi rako, uye zai rinopa zvakare bvudzi rako rinovaka muviri uye nhete yekudzivirira inodzivirira kurwisa kwekunze.
½ mukombe wemuto karoti
zai rakarohwa (kana uine vhudzi rine mafuta, shandisa chete zai jena).
Kapu imwe yekugeza
Sanganisa muto wekarotsi nezai mumudziyo.
Wobva wadambura vhura avocado, bvisa pulp wobva wawedzera kumusanganiswa.
Zvirove zvese pamwe chete kusvikira iwe wawana pasiti yakatsetseka. Wobva waisa musanganiswa uyu pane bvudzi rako sekunge ishampoo. Ita shuwa yekuvhara zvese.
Isa bvudzi rako muhombodo yekugezesa wobva warega kurapwa kuchiita basa raro iwe wakarara. Tinokurudzira kuti uise tauro pamutsago wako usati warara, kuitira kuti kapu yekugezesa ikatsvedza kubva pamusoro wako.
Pakupedzisira, geza bvudzi rako mangwanani nemvura yakawanda inotonhora.
Kurapa necarrot mafuta, beet, uye inozorodza kirimu
½ mukombe wemvura
Supuni imwe yeshuga
¼ mukombe wekunyorovesa kirimu
Shamba uye peel iyo karoti uye beet.
Wobva waisa karoti, beet, mvura, uye shuga mu blender wosanganisa kusvikira wawana zvakawanda kana zvishoma musanganiswa wakatsetseka. Simbisa musanganiswa uye wozoidururira mumudziyo pamwe neyakagadzirisa.
Wobva wasanganisa zvakanaka.
Usati waisa musanganiswa uyu, tanga wageza bvudzi rako senguva dzose.
Wobva waisa mafuta aya ekarotsi kubva pamidzi yebvudzi rako kusvika kumagumo uye kwiza zvinyoro nyoro.
Siya iri pamusoro Maminitsi makumi maviri kusvika makumi matatu .
Pakupedzisira, sukurudza nemvura inotonhorera.
Zvivakwa uye zvakanakira karoti kune vhudzi
Chokwadi iwe wakanzwa pazviitiko zvakawanda kuti karoti chikafu chine huwandu hwakawanda hwezvinovaka muviri, uye nekudaro chinobatsira kwazvo kune hutano hwedu nekushanda kwakakodzera kwemuviri wedu. Izvi zvinosanganisira kwete chete mukati memuviri wedu asiwo nzvimbo dzekunze, senge ganda kana vhudzi.
Izvo zvivakwa uye zvakanakira karoti zvirimo mukuumbwa kwayo sezvo yakafuma muvhitamini A uye vhitamini C. Iyo ine yakakwira muzana muzana ye beta-carotene uye zvicherwa senge potasium, pamusoro pekuve iri yakakosha sosi ye antioxidants. Zvese izvi zvinofunga kuti chikafu chinonaka ichi chinopa hutano hwakanaka kune bvudzi. Saka, iyo zvivakwa uye zvakanakira karoti yebvudzi vari.
Inodzivirira kurasikirwa kwebvudzi: kunyanya panguva idzodzo dzegore, senge mumatsutso nemuchirimo, apo bvudzi redu rinotambura nekuwedzera kwekurasikirwa nevhudzi, zvinokurudzirwa zvakanyanya kuidyisa zvakanaka, kuyedza kuidzikisa. Vitamin A uye C dzinobatsira kurwisa maitiro aya.
Yakawedzera kusimba uye yakajeka: Kana mane yako ikakuvara nevamiriri vezvemamiriro ekunze, inoita kunge yakaoma uye inoita seinotyoka zviri nyore, zvinoreva kuti haina kunyatsodyiswa. Mavitamini uye zvicherwa zvinopihwa nekaroti zvinobatsira kuti bvudzi rivheneke zvakanyanya uye riwedzere kusimba, kunze kwekuwana mukana wekusanduka uye kutambura mabhureki mashoma mumatipi.
Simbisa bvudzi kukura: Kana iwe uchida kuti bvudzi rako rikure pamwero unokurumidza zvishoma, unogona kutendeukira kumakarotsi, sezvo mavitamini achiwedzera kutenderera kweropa mumusoro wese, kumhanyisa maitiro ekukura kwebvudzi, uye kuwana zvinovaka muviri kumudzi webvudzi zviri nani.
Maitiro ekugadzira karoti bvudzi mask nhanho nhanho
Kuti chikafu ichi chisimbise bvudzi rako, zvinokurudzirwa kuti uzvibatanidze mukudya kwako nguva dzose, asi kana iwe uchida kuti zviitwe neimwe nzira, tinokukurudzira kuti ushandise masiki ane chinhu chikuru chiri karoti. Hazvina basa kuzviita, uye zvichave zvakachipa zvikuru sezvo uchikwanisa kuzviita wega kumba. Ku gadzira karoti bvudzi masiki, iwe ucha kudiwa:
1/2 tablespoon yeuchi
Izvo zvimwe zviviri zvigadzirwa zvinowedzera zvinokonzeresa karoti pane bvudzi rako, sezvo zvichipa zvakadzika-zvinovaka muviri, kuwedzeredza hydration, uye hutano.
Elaboration uye kurapwa
Peya uye cheka karoti uye bhanana kuita zvidimbu uye wobva wawedzera hafu yepuniki yeuchi.
Shandisa iyo blender kuti uwane musanganiswa wakafanana neyakagwinya, kwete mvura.
Chizora, nyorovesa vhudzi rako, uye riwaridze kubva pamidzi kusvika kumagumo woribata kwemaminetsi makumi maviri.
Wobva wasukurudza vhudzi rako wogeza shambuu wobva warisuka.
Tinokurudzira kuti iwe ushandise ichi chifukidzo kamwechete pasvondo kuti uwane zvaunoda.
Carrot mafuta ekugadzira masiki ebvudzi
Imwe nzira yekubatsirwa nezvinhu zvekarotsi yebvudzi ndeyekuzviisa mumask ako ese. Ungazviita sei? Wedzera madonhwe mashoma ekaroti mafuta ku ese kuti awedzere mamwe mabhenefiti. Unogona kuzviita pamba nenzira yakatwasuka. Kuti uite izvi, iwe unongoda chete:
Kugadzirira uye kushandisa
Peel makarotsi kutanga uye uadzike.
Kana waita kuti vagadzirire, tora saga, wedzera karoti uye wedzera mafuta omuorivhi kusvikira yaavhara zvachose.
Ngavamire, pakati pe65ºC ne90ºC, uye paunoona kuti mafuta ane orenji kana ruvara rutsvuku, unogona kubvisa musanganiswa kubva pamoto.
Simbisa iyo kuitira kuti iwe uve nemafuta chete, ayo atinokurudzira kuti uchengete mugirazi yegirazi.
Kana kuchitonhora, unogona kuzviwedzera kumasiki ako ese.
Alves-Silva J, uye al. (2016). mafuta anokosha. DOI:
Morita T, uye al. (2003). Hypaprotective mhedzisiro yemyristicin kubva kunutmeg (myristica fragrans)
10.1021 / jf020946n
Sieniawksa E, et al. (2016). Karoti mbeu yakakosha mafuta
10.1016 / j.indcrop.2016.08.001
Akakosha Oils Kune Hutano Matadza uye Mazino!
5 Akanakisa Ganda Kusimbisa Cream Kune Chiso Uye Mutsipa
7 DIY Chocolate Chiso Mask Mapepa - ita kuti kumeso kwako kupenye!
Kubvisa Blackheads: Zvaunofanirwa Uye Zvausingafanire Kuita
Sei Kumisa Bvudzi Kuputsa Uye Kudiridza - gadzira iyo…
Chii chinonzi Collagen uye Maitiro Ekuivaka Izvo Mumeso